साताको नेप्से : ५ दिन बजार घट्दा ३३.१९ अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार रकम १९.६६ प्रतिशत कमी
भदौ २७, काठमाडौं । सातामा नेप्से परिसूचक ३३ दशमलव १९ अंक घट्न पुगेको छ । गत साताको बिहीवार र यस साताको बिहीवारको तुलनामा यस्तो देखिएको हो । यस साताको आइतवारको बन्द विन्दु र बिहीवारको बन्द विन्दुको तुलनामा परिसूचक २० दशमलव ५८ अंक घटेको देखिन्छ । गत साताको बिहीवार भदौ १९ गते परिसूचक १ हजार १९१ दशमलव शून्य ७ विन्दुमा बन्द भएको थियो । यस साताको बिहीवार परिसूचक १ हजार १५७ दशमलव ८८ विन्दुमा बन्द भएको छ । नेप्से परिसूचक चार महीना अघितिरको विन्दरतर्फ लागेको छ ।
साताका ५ कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक ३३ दशमलव १८ अंक घट्न पुगेको छ । आइतवार १२ दशमलव ६१, सोमबार ९ दशमलव ५४, मंगलवार २ दशमलव २४, बुधवार ३ दशमलव ४६ प्रतिशत र बिहीवार ५ दशमलव ३३ अंकले परिसूचक घट्न पुगेको छ । आइतवार १ हजार १७८ दशमलव ४६ विन्दुमा बन्द भएको परिसूचक बिहीवार १ हजार १५७ दशमलव ८८ विन्दुमा बन्द भएको छ । आइतवार परिसूचक साताकै सबैभन्दा माथि १ हजार १९२ दशमलव ३३ विन्दुसम्म पुगेर अन्त्यमा १ हजार १७८ मा बन्द भएको हो । परिसूचक सातामा सबैभन्दा तल बिहीवार १ जहार १५६ दशमलव ३८ विन्दुसम्म पुगेको छ ।
साताको पाँच कारोबार दिनमा १७३ कम्पनीको रू. १ अर्ब ५६ करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ । गत सातामा रू. १ अर्ब ९४ करोडभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको थियो ।
गत सातामा रू. २९ करोडदेखि ५१ करोडभन्दा बढीसम्मको कारोबार भएको थियो । यो सातामा रू. २३ करोडदेखि रू. ३७ करोडसम्मको मात्र कारोबार भएको छ । यो साता गत साताको तुलनामा कारोबार रकम रू. ३८ करोड १७ लाखभन्दा कम भएको छ । यो १९ दशमलव ६६ प्रतिशत घटेको हो ।
गत सातामा ७० लाख ४९ हजार ३१९ कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो भने यस सातामा ६६ लाख ५५ हजार १६६ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । गत साताको तुलनामा सातामा ३ लाख ९४ हजार १५३ कित्ता कम कारोबार भएको छ । सातामा प्रभु बैंकको संस्थापक शेयर, सिभिल बैंकको संस्थापक शेयर, कुमारी बैंक, सोल्टी होटल लिमिटेड र लक्ष्मी बैंकको संस्थापक शेयरको सर्वाधिक कारोबार भएको छ ।
कारोबार रकम रू. हजारमा
एक महीनामा ७५.९७ अंक घट्यो नेप्से
साउन २७ गते र भदौ २६ गते भएको नेप्से कारोबारमा परिसूचक ७५ दशमलव ९९७ अंक घटेको देखिन्छ । साउन २७ गते सोमवार १ हजार २३३ दशमलव ८५ विन्दुमा बन्द भएको परिसूचक भदौ २६ गते १ हजार १५७ दशमलव ८८ विन्दुमा आइपुगेको छ । कारोबार रकमको आधारमा एक महीनामा २० प्रतिशत घटेको छ भने बजार पूँजीकरण ५ दशमलव ९२ अंक घटेको छ ।
सातामा बजार पूँजीकरण र सेन्सेटिभ इन्डेक्सको परिवर्तन
गत साताको तुलनामा बजार पूँजीकरण २ दशमलव ७८ प्रतिशत घटेको छ । गत साताको अन्तिम बिहीवार रू. १५ खर्ब १२ अर्ब रहेको बजार पूँजीकरण यस साताको बिहीवार रू. १४ खर्ब ७० अर्बमा आइपुगेको छ । सेन्सेटिभ इन्डेक्स ६ दशमलव ११ अंकले घटेको छ । गते साताको बिहीवार २५९ दशमलव ९ विन्दुमा रहेको सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस साताको विहिवार २५३ दशलमव ७९ विन्दुमा आइपुगेको छ ।
लगातार दुई दिन बढेको बजार मंगलवार ६.६१ अंक घट्यो[२०७७ सावन, २७]
ओटिसी बजारमा हालसम्म १२३ ओटा कम्पनी दर्ता, ती मध्ये १० ओटा कम्पनी धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत *[२०७७ सावन, २७]
एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको आईपीओ नतिजा सीडीएससीमा डाटा अपडेट हुन नसक्दा लगानीकर्ताले थाहा पाउन सकेनन्[२०७७ सावन, २७]
ग्रामिण विकास लघुवित्तमा सञ्चालक समिति परिवर्तन[२०७७ सावन, २७]